« Propagandy anaty orana »
09/10/2018 admintriatra 0
Voalazan’ny lalàm-panorenana fa tsy azo atao mandritra ny vanim-potoan’ny orana ny fifidianana eto amin’ny firenena. Ny mifanohitra amin’izay anefa no mitranga ao anatin’izao fisokafan’ny fampielezan-kevitra izao. Nirotsaka tamin’ireo faritra maro mantsy ny orambaratra, ary tena …Tohiny
Angidimbin’ireo kandidà : Lalàna sa politika ?
Hatreto , dia samy manana ny fanazavany mikasika ny lalàna mifehy ny fanidinana an’habakabaka eto Madagasikara ny primatiora sy ny ACM, na ny « Aviation Civile de Madagascar », izay mijery ny filaminan’ny fisidinana. Raha …Tohiny
Omaly no tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny Kandida Robimanana Orlando taorian’ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy tany amin’ny distrikan’i Sambava ny Alahady lasa teo. Na dia teo aza ny ratra nahazo azy, dia nilaza ity Kandida …Tohiny
Tratry ny vela-pandrika. Raikitra ny fifanjevoana teo amin’ny jiolahy sy ny zandary tany Ambalamanasy Toamasina nandritry ny fisafoana, ka lehilahy iray no maty voatifitra rehefa avy nanafika tamin’ny trano iray tao an-toerana ny alin’ny sabotsy …Tohiny
“Tsy olona iray akory no antsoina hoe antoko koa manamafy eto ny tenako, solombavambahoaka voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Hiaraka Isika fa tsy misy idiran’ny antoko Hiaraka Isika mihitsy ny fanambarana nataon’i Camille Vital”, hoy ny ...Tohiny